Gịnị ka Tiny Tim na-ekwu na chọọchị? - Magazin ADL ➡
Gịnị ka Tiny Tim na-ekwu na chọọchị?
“Chineke gọzie anyị niile!” Anyị na-amụta na Obere Tim nwere obi oma ma nwee ike inye um u mmadu nha anya h ur u n'anya. Obere Tim bilie karịa nhụjuanya nke ya ma nwee olile anya na ndị hụrụ ya ga-eche maka Jizọs.
Nke a, Ọ nweghị ụlọ mkpọrọ enweghị ụlọ ọrụ ọrụ?
“Nwee ha mba ebe mgbaba ma ọ bụ akụ? ” mkpu Scrooge. “Enweghị ụlọ mkpọrọ? ” kwuru Mmụọ ahụ, jiri okwu nke aka ya chigharịkwuru ya na nke ikpeazụ ya. “Enweghị ụlọ ọrụ? "
Kedu ihe kpatara obere Tim ji dị mkpa? Obere Tim na-arụ ọrụ ihe atụ. Ọ na-etinye ihu nye ọtụtụ puku ụmụaka dara ogbenye na-enweghị ihu Dickens hụrụ na London kwa ụbọchị. Ọtụtụ ọrụ Dickens bụ maka ụmụaka dara ogbenye, mana A Christmas Carol bụ ihe kachasị ike ma nwee mmetụta.
30 Azịza nke Ajụjụ Ndị Ọzọ Yiri
Kedu ihe Cratchits na-eri maka nri abalị?
Gini mere obere Tim nwere nkpu?
Saidnye kwuru Merry Christmas one and all?
Kedu okwu Scrooge ji ama ama?
Kedu ihe kpatara obere Tim ji dị mkpa?
Kedu onye na-arịa ọrịa mmụọ ya?
Kedu ihe kpatara Bob Cratchit ji ese ihe nkiri?
Gịnị ka obere Tim Symbolize?
Gini mere mmuo ahu ji egosi Scrooge nke ndi na egwuputa ala Lighthousemen na ndi Shipsmen?
Kedu ka Scrooge si meghachi omume mgbe Mmụọ nke abụọ abịaghị mgbe mgbịrịgba ahụ kụrụ otu?
Kedu aha mbụ Fezziwig?
Kedu ka Scrooge si meghachi omume na ọnwụ Tiny Tim?
Kedu ihe Fezziwig pụtara?
Afọ ole ka Tiny Tim dị na Christmas Carol?
Olee otú ị ga-esi mara omume Bob Cratchit banyere Scrooge?
Ọnye na-bụ Fanny in A Christmas Carol?
Kedu mgbe Dickens dere otu ekeresimesi?
Kedu mọ bụ nke kachasị mkpa na carol ekeresimesi?
Onye kwuru na Mmadu bu ahia m?
Kedu ọrịa Tiny Tim na-arịa?
Tiny Tim na-anwụ anwụ see okwu?
Kedu ka esi egosi Cratchits na A Christmas Carol?
Kedu ihe Fezziwig gosipụtara?
Gịnị mere Scrooge ji sị Wepụ m?
Afọ ole ka Martha Cratchit dị?
Kedu ka Scrooge si esi na windo pụọ na mmụọ?
Charles Dickens na-ewu ewu ọdịnala, Ekeresimesi Bekee na 1843 na akwụkwọ akụkọ ya A Christmas Carol, mgbe Bob Ndabere na ezinụlọ ya nọdụ na Christmas Day na eri a nri abalị nke ọgazị na mashed nduku na apụl ihendori esonyere sage na yabasị nri na sotere Christmas pudding.
Ihe kpatara iji kwado nyocha: Donald Lewis gosipụtara nyocha a ma dee ya na American Journal of Diseases of Children na 1992. Lewis kwuru Obere Tim mkpụmkpụ ga- bụrụ ihe ịrịba ama mbụ nke ọrịa ahụ. Nro nke okpukpu ga- akaụntụ maka ojiji nke a mkpọchi. Na akụrụ akụrụ nwere ike ịkpata ọnwụ.
Scrooge: “M ga-asọpụrụ Christmas n'ime obi m, ma gbalịa idebe ya n'afọ niile. Aga m ebi n'oge gara aga, Ugbu a, na Ọdịnihu. Mmụọ nke mmadụ atọ ahụ ga-agba mgba n'ime m. ”
Obere Tim nzube bụ sere na-agụ n'obi, na Scrooge si! Ọ na-anọchite anya ụmụaka niile dara ogbenye na "oke ọnụọgụ" nke Scrooge jụrụ inye aka. Dickens chọsiri ike inyere ndị ogbenye aka, ma ụmụaka.
were ya iwe ma ọ bụrụ na m nwaa. Ndi oria ya na acho? Ya onwe ya mgbe niile. Lee ọ na-ewebata ya ya isi na-enweghị mmasị na anyị, ọ gaghị abịa rie nri.
Obere Tim, site n'àgwà ya, na-anọchi anya ịdị ọcha, ịdị mma, aka ya dị ọcha, na ọ joyụ. Ọ na-anọchitekwa ụmụntakịrị dị iche iche nọ ná mkpa na akaraka ha ma ọ bụrụ na enyereghị ha aka ha chọrọ.
Mmụọ nsọ na-ewere Scrooge na ulo oku na ship nke mere na o nwere ike ihu ndi mmadu no n’ime onodu ojoo ndi ka nwere mmuta ekeresimesi. Ha ndikom na-eme mmemme, na-enwe ọ enjoyingụ na ibe ha, na-echetaghachi ihe ndị mere n’oge gara aga, na-eche maka ndị ha hụrụ n’anya, nweere ibe ha ọmịiko, ma na-agọrọ onwe ha ọfọ ekeresimesi.
Kedu mere Scrooge meghachiri omume mgbe mmụọ nke abụọ abịaghị 'mgbe mgbịrịgba ahụ kụrụ otu? " Scrooge meghachiri ụjọ, yabụ mgbe ọ hụrụ mmụọ ahụ adịghị ebe ọ malitere ịmegharị curtian ya iche. Ọ na-egosi mgbanwe na Scrooge maka na mgbe mo nke mbu biara o mere achọghị ịga, ugbu a ọ dị njikere ịga.
Fezziwig n'ọdịdị, omume, na ịkpa agwa. Maazị Fezziwig a na-egosi dị ka onye na-eme egwuregwu, nwoke nwere nkịta nwere nnukwu Welsh Wig.
A Christmas Carol agwa
Fezziwig na ndị ọrụ ya na-agba egwu, ihe atụ nke John Leech sere
Mpụta izizi Ekeresimesi Ekeresimesi 1843
Kere site Charles Dickens
Scrooge enwe mmetụta miri emi mgbe ọ nụrụ banyere Ọnwụ Tiny Tim, na obi nkoropụ mgbe ọ ghọtara nwoke nke owu ọmụma ya na-ahụ anya bụ nke ya. Site na mgbe mmụọ ikpeazụ ga-abịa Scrooge, ọ na-ewere onwe ya dị ka onye gbanwere agbanwe. Ndị mmụọ ahụ chọrọ ijide n'aka na ihe ha na-akụ.
Fezziwig bu agwa sitere na akwụkwọ akụkọ A Christmas Carol nke Charles Dickens kere iji nye ọdịiche nke ebumnuche Ebenezer Scrooge gbasara ụkpụrụ omume azụmahịa. Scrooge, onye mụrụ ọrụ n'okpuru Fezziwig, is echiche nke onye ọ rụrụ ọrụ dị ka nwa okorobịa.
Na Charles Dickens's A Christmas Carol, Stave 2: “Nke Mbụ n’ime Mmụọ Atọ”, Ebenezer Scrooge a na-ewere ya na oge gara aga. Scrooge maara onye ọ ga-abụ na ọ ga-ahụ ọzọ: ndị nwụrụ anwụ nwanne nwaanyị, Fan, ma ọ bụ Fran.
Fezziwig bụ onye nwere obi ụtọ nke na-enye ndụmọdụ Scrooge jiri obiọma na mmesapụ aka, ma gosipụta ezigbo ịhụnanya n'ebe ndị ọrụ ya nọ. Ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị mgbe Scrooge bụ nna ya ukwu, ọ na-agụtaghachi Fezziwig dika mmuo nke ekeresimesi gara aga.
Àgwà Scrooge nlelị n'ebe o doro anya na ndi gbara ya gburugburu abughi ekeresimesi. Ọ chọrọ ịnọ naanị ya, ma họrọ karịa nhụsianya.
Ná ngwụsị nke akwụkwọ ahụ, a na-eduga ndị na-agụ akwụkwọ kwenyere na ịkwụ ụgwọ na-ewelite Scrooge gbanwere Bob Cratchit na-enyere aka ịchekwa Obere Tim. Otu echiche na-ese na ntanetị bụ na Obere Tim tara ahụhụ site na akụrụ tubular acidosis (RTA), ọrịa akụrụ na-eme ka ọbara bụrụ acidic.
Fanny emetụta ọtụtụ n'ime akụkọ ifo nwanne ya nwoke, gụnyere "Little Fan", nwanne nwanyị nke ọdụ nwanne Ebenezer Scrooge na A Ekeresimesi Carol, na Florence Dombey, nwanne nwanyị Paul nke okenye hụrụ n'anya na Dombey na Ọkpara. Eserese a, kwenyere na ọ bụ nke Fanny, e sere na 1836.
nke Charles Dickens dere
Otu echiche na-ese na ntanetị bụ na Obere Tim tara ahụhụ site na akụrụ tubular acidosis (RTA), ọrịa akụrụ na-eme ka ọbara bụrụ acidic. Ihe ga-esi na ya pụta bụ ịla azụ azụ, akụrụ, ọrịa ọkpụkpụ na akụrụ na-aga n'ihu-mgbaàmà ndị yiri ka ha na ụfọdụ Obere Tim.
Dị ka ọdụdụ Cratchit, ọ dị afọ asaa ochie. N’elu ebum n’uche Ebenezer Scrooge, Mọ nke Christmas Ugbu a na-ekweta na ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ agbanweghị na Obere Tim enwetaghi ọgwụgwọ ọ choro, ọ gaghi anọ ogologo ndụ karịa ya.
Ọ bụrụ na ọ dị ka ya na, ọ kaara ya mma ime ya ma belata ọnụ ọgụgụ ndị nwere ego. ” Mgbe Scrooge jụrụ mmụọ nke Christmas Present ihe ọdịnihu ga Obere Tim, Azịza nke Mmụọ Nsọ na-eme ka o doo anya Obere Tim, na-enweghị enyemaka, ga- n'oge na-adịghị na. Ekeresimesi ekeresimesi na afo ohuru oma!
Dickens na-eji usoro dị iche iche emepụta mmetụta nke ezinụlọ nwere obi ụtọ, n'agbanyeghị Cratchits dara ogbenye. Na Ndabere ezinụlọ, onye ọ bụla na-enyere aka ma na-arụ ọrụ dị ka otu ìgwè. Na ọnọdụ dị n'etiti akwụkwọ ahụ, ndị Cratchits na-eri nri Christmas nri abalị, mgbe Scrooge na Mọ nke Ekeresimesi Ugbu A lelee ha.
Azịza na Nkọwa: Na Charles Dickens's A Christmas Carol, Fezziwig na-anọchite anya nkwenye nke onye isi okwu, Ebenezer Scrooge. Fezziwig na-emesapụ aka, obiọma na nzuzu. Fezziwig a kọwara dị ka ezigbo onye were n'ọrụ, onye ji ndị ọrụ ya kpọrọ ihe ma na-akwanyere ha ùgwù.
Mgbe Fan biara buru Scrooge, anyị na-ahụ ihe mere ọ ga-eji bụrụ ụzọ ya mere. Ọ bụ Scrooges chọrọ, ma ọ tụfuru ya mgbe ọ ghọrọ onye anyaukwu. Gịnị mere Scrooge ji kwuo, "Wepu m“? Ọ kpọrọ onyinyo ahụ a na-egosi ya asị.
MARTHA AKPATARA– Afọ 12-16. Nwanne nwanyị nke okenye Cratchit, na-arụ ọrụ ugbu a iji nyere ezinụlọ aka. Obi ụtọ, dị jụụ, nne nke abụọ nye ụmụntakịrị, nwere mmetụ nke ike ndọda nke na-abịa site n'ịghọta ntakịrị mkpa akụ na ụba nke ezinụlọ na-agbado. PITA CRATCHIT - Afọ 12-16.
akwụkwọ na akwụkwọ, ihe omume na ebe nkiri, Egwú, akwụkwọ ndị okenye
Kedu ngwa kachasị mma maka kalenda ndị di na nwunye?
Gịnị ka ịdị arọ pụtara na ọnụ ọgụgụ?